REHEFA ANY AMBANIVOHITRA (Tapany I) – Blaogin'i Voniary
Fotoanan’ny fialan-tsasatra izao, maro amintsika no misintaka kely miala ny tanan-dehibe. Andramo apetraka mihitsy ange ny finday, ny « écouteur » sy ireo fitaovana teknolojia avo lenta e ! Ho hitanao fa maro ny zava-tsoa azonao araraotina any ambanivohitra. Na ny rivotra madio, na ny fahanginana, na ny fihaonana amin’ireo havana dia misy voka-tsoa eo amin’ny fiainana avokoa raha hainao ny mitrandraka azy.
ILAINA NY MIALA SASATRA
Indray andro izay tafaresaka tamin’ilay namako tompona orinasa fanontana boky izay aho. Fotoam-pialan-tsasatra tamin’izay ka nilaza fa haka rivotra any anindrana izy sy ny fianakaviany satria niato kely koa ny orinasa. Sady nananiany aho no nanao hoe : « Efa tafa kosa ianareo izany fa manao vakansy ny lehibe sady alefa fialan-tsasatra faobe koa ny mpiasa ! » Hoy ilay namako namaly tsy taitra « Tsy dia hoe izany loatra fa hatramin’ny fotoanandron’i dadabenay dia efa izay foana no fanao. Mila atsahatra tsy miasa mihitsy ireo milina lehibe, tapa-bolana farafahakeliny, ao anatin’ny taona. Amin’izay afaka miasa tsara ireo hiatrika ny fanontana boky aman’arivony hoan’ny fidiran’ny mpianatra.» Hitanao amin’izany fa na ny milina aza omena tsy maintsy miala sasatra. Ianao koa, manokana fotoana iatoana amin’ny asanao, akanao aina sy anovozanao hery.
MIANOKA AO ANATY TONTOLO MAHAFINARITRA
« Ny tontolo no maha-ambanivolo » hoy izay mpanakanto iray izay . Ny rivotra madio, lavitry ny entona manepotry ny fiarakodia sy ny setroky ny orinasa fanodinana dia tena mahasalama tokoa. Tsy vitan’ny hoe manadio ny fitaovam-pisefoana ny rivotra tsara fa mampahomby ny asan’ny atidoha ihany koa. Ny fahitana ny tanety midadasika sy ny zava-maitso indray dia mampisokatra ny saina. Aty an-tanan-dehibe manko, mihiboka foana no fiainana : ao anaty efitra, ao anaty fiarakodia, ao anaty birao sy ny sisa. Manaraka izany, ny feo maro isan-karazany : ny renirano misasasasa, ny voronkely misioka ary ny rivotra mitsoka malefaka dia miteraka fitoniana anaty. Raha mba fantatrao mantsy fa maro ny vazaha vonona ny handany tsy toko tsy forohana ahazoana ny tahaka izany. Amin’ny sehatry ny haingon-trano aza efa misy ireny sarintsarin-drano maka tahaka ny renirano mikoriana ireny. Tsy vitsy ireo mpamorona feon-kira mampilamin-tsaina no mampiasa ireny feo voajanahary ireny. Koa ianao izay afaka mianoka izany maimaim-poana indray ve no tsy anararaotra ?
Manomboka izao ry havako manantena aho fa hankafy ny soa eny ambanivohitra ianao, na dia fotoana vitsivitsy ihany aza. Apetraho vetivety ny « Facebook », ny « smartphone » sy ny « écouteur ». Ary aza variana mijanona ao anaty fiara ao fa mivoaha mba hianoka ny tontolo mahafinaritra eo ambany masonao.
ambanivohitra, ésotérisme gasy, développement personnel gasy, empowerment gasy, fahaiza-miaina, fijery miabo